I-Intel yazisa iiprosesa ezintsha ezifikelela kwi-18-core CPU | Ndisuka mac
I-Intel yazisa iiprosesa ezintsha ezifikelela kwi-18-core CPUs
Namhlanje sifunde iinkcukacha zeeprosesa zokugqibela eziphezulu ezivela kumthengisi wokuqala weprosesa kaMac, iprosesa ye-Intel. Kule minyaka yangoku, I-Intel yayisala ngasemva malunga nokusebenza kunye nokusetyenziswa kweprosesa, Nditsho nokubuza amandla eqela le-Pro ukwenza imisebenzi yokuhlela yeaudio kunye nevidiyo.
Kodwa ukusukela namhlanje i-Intel ithathe inyathelo eliya phambili, kunye nenkqubo yoluhlu Intel Core Uthotho X kunye neeprosesa ezithi ephepheni, zithembise ukuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abanzima kakhulu.
Oko sikubonileyo ziiprosesa ezijolise ikakhulu kwiikhompyuter zedesktop, amaxabiso aso avela kwi-242 ukuya kwi-1.999 yeedola, eyokugqibela ibe sisalathiso sabasebenzisi ngokungathandabuzekiyo abafuna amandla amaninzi kwi-Mac Pro entsha, ebesiyilindele kwi-Apple kwiinyanga ezidlulileyo. Le processor, eyaziwa njenge X-Series i9-7908X, ine-18 cores.
Kodwa sihamba ngamalungu, i-X series iqala ukusuka kwiprosesa yokuqala, kubasebenzisi abaneemfuno ezimbalwa zobugcisa. Imalunga nayo I-i5-7640X, kunye ne-4 cores kunye ne-3 GHz. Inyathelo elilandelayo sele lenziwe ngamaqela aphakathi. Sithetha ngomqhubekekisi I7-7820X Intel ukuba iqala ukusuka kwi-3,6 GHz, kodwa inokuya kwi-4,5 GHz Ngenqaku le-Intel Turbo Boost Max.
Asicingi ukuba ukuhanjiswa kweeprosesa eziphezulu ezivela kwi-Intel yinto eyenzekileyo, kanye xa kusele nje iintsuku ezimbalwa kwinkomfa yabaphuhlisi be-Apple eza kubanjwa ngoMvulo olandelayo, umhla we-5 kwaye ndivela eMac izokugcina unolwazi phantse ukuya kumzuzu. Ngale ntetho, i-Intel igxotha amarhe malunga nokusilela kokuvela kweeprosesa zayo, ukuya kwinqanaba lokuba kwahletywa ukubona iiMacs ezizayo kunye neeprosesa ze-AMD. I-Intel iwadlalile amakhadi ayo kwaye nangona iApple ingahlali ibonisa izixhobo kwiWWDC, kulo nyaka kunokuba njalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Intel yazisa iiprosesa ezintsha ezifikelela kwi-18-core CPUs
I-Ukraine isayinela iApple Pay embindini wonyaka olandelayo